Aad raadinayso qoyskaaga | Fedasil info - informatieplatform voor asielzoekers in België
Aad raadinayso qoyskaaga
Laanqayrta Cas ayaa kaa caawinaysa raadinta xubnaha qoyskaaga Laanqayrta Cad waxay iskaashi la sameeysaa hay'adaha kale Laaqayrta Cas iyo Bisha Cas ku sugan dunida oo dhan, oo ku leh wakiilo gaar ah goobaha colaadeed.
Adeegyada 'Dib-u-soo-celinta Xiriirada Qoyska' ee Laanqeyrta Cas waxay kaa caawiyaan inaad hesho qoyskaaga ka dib socdaalka, dagaalada hubeysan, musiibooyinka dabiiciga ah ama musiibooyinka bini'aadanimo. Adeeggu waa bilaash.
Dib-u-soo-celinta xiriirada qoyska ayaa kaa caawinaya:
raadinta xubnaha qoyskaaga ee maqan
dib ula xiriirida xubnaha qoyskaaga
La xiriirida xubnaha qoyska ku sugan goobaha colaadeed
Goobaha colaadeed ama musiibooyinka, khadadaka warisgaarsiinta sida telefoonka, boostada iyo Internet-ka inta badan ma shaqeynayaan. Iyadoo loo marayo fariimahaLaanqayrta Cas, Laanqayrta ayaa kaa caawinayso inaad dib ula xiriirtid goobaha ay saameeyeen iyo aagga ay saameeyeen iyo dunida kale ka baxsan:
Ma u baahan tahay macluumaad ama caawimaad dheeraad ah?
Dib-u-soo-celinta xiriirada qoyska (Rode Kruis) Xiriirada qoyska (Croix Rouge)